” ဇနီးလောင်းလေးနဲ့ဘောပွဲ​လောင်းခဲ့ရာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် အိမ်မှုကိစ္စတွေ အကုန်လုပ်ရတော့မယ့်အကြောင်းကို အရွှန်းဖောက်ပြောပြလာတဲ့ နိုင်းဝမ်း ” – CELEBRITY NEWS
K Wave News
” ဇနီးလောင်းလေးနဲ့ဘောပွဲ​လောင်းခဲ့ရာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် အိမ်မှုကိစ္စတွေ အကုန်လုပ်ရတော့မယ့်အကြောင်းကို အရွှန်းဖောက်ပြောပြလာတဲ့ နိုင်းဝမ်း ”
Myanmar CeleCafe ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော် နိုင်းဝမ်းကတော့ အမြဲပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး သူ့ရဲ့စုံတွဲသီချင်းတော်တော်များများကိုမိန်းကလေး​​ကျော်းလေးပရိသတ်မရွေး သဘောကျအားပေးဝန်းရံခြင်းခံရတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ နိုင်းဝမ်းရဲ့ အချစ်ရေးကတော့ သူ့ရဲ့ ချစ်သူမွေးနေ့မှာ စိန်တစ်ဆင်စာနဲ့တင်တောင်းခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင် အခုလက်ထပ်ရက်လည်း သတ်မှတ်ထားပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ ”အိပ်စရာရှိတာမအိပ်ဘူး ပွဲပြီးတဲ့အထိစောင့်ပြီး အိမ်ကနေလှန်းညောင့်နေတယ် ဒီမိန်းမကတော့😡😡😡ပျော်မနေနဲ့ ဟာရီကိန်းသွင်းတဲ့ဂိုးမပါဘူး😏မန်စီးတီးကောင်းမှုကြောင့် မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ ဈေးသွား၊ ထမင်းချက်၊ အဝတ်လျှော်၊ ပန်းကန်ဆေးရတော့မယ် လခွမ်း😭😭😭”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ဇနီးလောင်းလေးနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အသင်းကိုအားပေးခဲ့ပေမယ့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် ပြေညထားတဲ့ကတိအတိုင်း အိမ်မှုကိစ္စတွေပြုလုပ်ရတော့မယ့်အကြောင်းကို အရွှန်းဖောက်ပြောပြခဲ့တာပါ။
နှစ်ပေါင်းများစွာချစ်ကြိုက်လာရတဲ့ ငယ်ချစ်တွေဖြစ်တာကြောင့်အမြဲ သူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့ မြင်သူတိုင်းအားကျပျော်ရွှင်စရာပါပဲနော်။ပျော်စရာကောင်းတဲ့သူတို့စုံတွဲလေးကို ပရိသတ်တွေကလည်း စနောက်ကာမှတ်ချက်တွေပေးနေကြတာပါ။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Myanmar Cele-Cafeပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Source : KyawZin Latt
Candy – Myanmar Cele-Cafe
” ဇနီးလောငျးလေးနဲ့ဘောပှဲ​လောငျးခဲ့ရာ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာကွောငျ့ အိမျမှုကိစ်စတှေ အကုနျလုပျရတော့မယျ့အကွောငျးကို အရှနျးဖောကျပွောပွလာတဲ့ နိုငျးဝမျး ”
Myanmar CeleCafe ပရိသတျကွီးရေ အဆိုတျော နိုငျးဝမျးကတော့ အမွဲပြျောပြျောနတေတျပွီး သူ့ရဲ့စုံတှဲသီခငျြးတျောတျောမြားမြားကိုမိနျးကလေး​​ကြျေားလေးပရိသတျမရှေး သဘောကအြားပေးဝနျးရံခွငျးခံရတဲ့သူတဈယောကျပါ။ နိုငျးဝမျးရဲ့ အခဈြရေးကတော့ သူ့ရဲ့ ခဈြသူမှေးနမှေ့ာ စိနျတဈဆငျစာနဲ့တငျတောငျးခဲ့တာပါ။ဒါ့အပွငျ အခုလကျထပျရကျလညျး သတျမှတျထားပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာတော့ ”အိပျစရာရှိတာမအိပျဘူး ပှဲပွီးတဲ့အထိစောငျ့ပွီး အိမျကနလှေနျးညောငျ့နတေယျ ဒီမိနျးမကတော့😡😡😡ပြျောမနနေဲ့ ဟာရီကိနျးသှငျးတဲ့ဂိုးမပါဘူး😏မနျစီးတီးကောငျးမှုကွောငျ့ မနကျမိုးလငျးတာနဲ့ ဈေးသှား၊ ထမငျးခကျြ၊ အဝတျလြှျော၊ ပနျးကနျဆေးရတော့မယျ လခှမျး😭😭😭”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ဇနီးလောငျးလေးနဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျအသငျးကိုအားပေးခဲ့ပမေယျ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာကွောငျ့ ပွညေထားတဲ့ကတိအတိုငျး အိမျမှုကိစ်စတှပွေုလုပျရတော့မယျ့အကွောငျးကို အရှနျးဖောကျပွောပွခဲ့တာပါ။
နှဈပေါငျးမြားစှာခဈြကွိုကျလာရတဲ့ ငယျခဈြတှဖွေဈတာကွောငျ့အမွဲ သူတို့ခဈြသူနှဈဦးရဲ့ဆကျဆံရေးကတော့ မွငျသူတိုငျးအားကပြျောရှငျစရာပါပဲနျော။ပြျောစရာကောငျးတဲ့သူတို့စုံတှဲလေးကို ပရိသတျတှကေလညျး စနောကျကာမှတျခကျြတှပေေးနကွေတာပါ။ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Myanmar Cele-Cafeပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
“Snareရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော Official Album Rap Game ကို ထွက်ရှိတာ (၁၀) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ အာရှတိုက်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးသော Hip Hop Virtual Concert ကိဖျော်ဖြေမယ်ဆိုတဲ့နေဝင်း”
” အိုင်းရင်ဇင်မာမြင့်ရဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူ...
” Covidကာလမှာတောင် မွေးနေ့လက်ဆောင်ကို တကူးတက...
” စိုင်းစိုင်းရဲ့အမှတ်တရပိုစ့်လေးကြောင့် သူတို့...
” မိဘပိုက်ဆံမပါဘဲ မွေးနေ့အလှူငွေ၁၈သိန်းကို...
” Covid 19ရှိမရှိစစ်ဆေးခဲ့ကာ...
” သူမရဲ့ပရိသတ်တွေကို မပြောမဆိုနဲ့ Surprise...
Copyright © 2020. Created by Celebrity News.